သတ္တိလေးသာ လိုတာပါ။ - For her Myanmar
“ ကျွန်မ ရှက်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘဲ မြိုသိပ်ထားတာပါ။ ဟို လူကြီးက ကျွန်မကို မဖွယ်မရာ လုပ်တယ်၊ မကြားဝံ့တဲ့ စကားတွေ ပြောတယ်။ သူ့ကို မုန်းတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာမှ ပြန်မလုပ်ရဲဘူး လူအသိလည်း မခံရဲဘူး”
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ သီးသန့်စကားဝိုင်းလေးတွေမှာ ဒီလို စကားတွေနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူ ရင်ဖွင့်စကားလေးတွေ ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဲဘဲ မြိုသိပ်ထားရတဲ့ အဖြစ်တွေ မိန်းကလေးအများစုမှာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
Sexual Harassment နဲ့ ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်လောက်များများရှိသလဲ?
သူတို့ထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်ကများ ကျူးလွန်သူကို အရေးယူဖူးလဲ?
ဘယ်သူတွေကရော အခုလို ရှက်လို့ နှုတ်ဆိတ်နေကြတာလဲ ဆိုတဲ့ အတိအကျကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေမရှိပေမဲ့ အမျိုးသမီးတော်တော်များများကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်မကြုံရင်တောင် သူများဖြစ်တာကို ကြားကြရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရရင် ဘာလို့ မိန်းကလေးတွေ နှုတ်ဆိတ်နေကြတာလဲ?
ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်လို့လား?
ဒါကိုတော့ အက်ဒ်မင်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ အမြင်နဲ့ ဖြေရရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> အမျိူးသားတွေ ဝင်ခွင့်မရှိဘဲ အမျိုး သမီးတွေပဲကြီးစိုးတဲ့ရွာ Umoja
ကျူးလွန်သူတွေ ပစ်မှတ်ထားတာကလည်း ဆယ်ကျော်သက် နဲ့ နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဒီအရွယ်လေးတွေက အတွေ့အကြုံနည်းပြီး ရှက်တတ်ကြောက်တတ်တာမို့ ကျူးလွန်ရလွယ်ကူသလို လူသိရှင်ကြားဖြစ်တာလည်း နည်းပါတယ်။
အမျိုးသမီးလေးတွေ ရှက်လို့ ငြိမ်ခံနေလေလေ၊ ကျူးလွန်သူတွေ ဒီလို နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့ အားပေးသလိုဖြစ်နေလေလေပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မိန်းကလေးတွေ မရှက်ကြ၊ မကြောက်ကြဘဲ ဖြေရှင်းရဲ၊ ကျူးလွန်သူကို နောက်မလုပ်ရဲအောင် ဖော်ထုတ်ရဲ ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆိုပေမဲ့လို့ တကယ်တန်းတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ရှိရင်းစွဲရှက်ကြောက်စိတ်ကို ဖျောက်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ နဂိုကတည်းက ရှက်တတ်၊ ကြောက်တတ်တဲ့ စိတ်အခံရှိနေမယ်၊ လူကြီးမိဘတွေကလည်း မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်၊ သူများစတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အနေအထိုင်မတတ်လို့ ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆုံးမနေမယ် ဆိုရင် ဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ကြုံလာသည့်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်မယ်လို့ လွဲမှားစွာယူဆပြီး လူသိမခံရဲဘဲ ငြိမ်နေကြမှာပါ။
ဒီအတွက် အက်ဒ်မင်တို့ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်စ တစ်စ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သမီးတွေ၊ ညီမတွေ၊ တူမလေးတွေကို ငယ်စဉ် နားမလည်သေးတဲ့ အရွယ်ကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုင်တွယ်သူရှိလာရင် မခံဖို့၊ မရှက်ကြောက်ဘဲ လူကြီးတွေကို တိုင်ဖို့ သင်ပေးပါ။
Related Article >>> Black Hole ရဲ့ ပထမဆုံးဓာတ်ပုံကို ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး (သို့) Katie Bouman
“မိန်းကလေးဆိုတာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို သွပ်သွင်းပြီး ရှက်ဖို့၊ ကြောက်ဖို့၊ အိနြေ္ဒကြီးဖို့ သင်ပေးတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်တတ်တဲ့၊ ကိုယ့်ကို ထိပါးစော်ကားလာရင် တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူ့ရဲ့ ရင်သား နဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှာ မတည်ပါဘူး။ ဒါတွေကို ကိုယ့်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဘယ်သူမှ ထိကိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျူးလွန်ခံရသည့်တိုင်အောင် ဒီလို ကျူးလွန်ခံရခြင်းဟာ ကိုယ့် ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ အရှက်တရားကို မယုတ်လျော့စေပါဘူး။
ဒီလို ကျူးလွန်တတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေ နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့ အခွင့်အရေး မရအောင် အမျိုးသမီးတွေက ရဲရင့်စွာ ဖြေရှင်းရဲဖို့ သိပ်ကို လိုအပ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… ဒီလို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် တို့တွေ အဓိက လိုအပ်တာက ဖြေရှင်းရဲတဲ့ သတ္တိကို မွေးဖို့ပါပဲလို့..
“ ကြှနျမ ရှကျလို့ ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောဘဲ မွိုသိပျထားတာပါ။ ဟို လူကွီးက ကြှနျမကို မဖှယျမရာ လုပျတယျ၊ မကွားဝံ့တဲ့ စကားတှေ ပွောတယျ။ သူ့ကို မုနျးတယျ ဒါပမေဲ့ ဘာမှ ပွနျမလုပျရဲဘူး လူအသိလညျး မခံရဲဘူး”
အမြိုးသမီးတို့ရဲ့ သီးသနျ့စကားဝိုငျးလေးတှမှော ဒီလို စကားတှနေဲ့ အလားသဏ်ဍာနျတူ ရငျဖှငျ့စကားလေးတှေ ကွားဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ဒါမှမဟုတျ ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောရဲဘဲ မွိုသိပျထားရတဲ့ အဖွဈတှေ မိနျးကလေးအမြားစုမှာ ဖွဈနကွေပါတယျ။
Sexual Harassment နဲ့ ကွုံတှဖေူ့းတဲ့ မိနျးကလေးတှေ ဘယျလောကျမြားမြားရှိသလဲ?
သူတို့ထဲက ဘယျနှဈယောကျကမြား ကြူးလှနျသူကို အရေးယူဖူးလဲ?
ဘယျသူတှကေရော အခုလို ရှကျလို့ နှုတျဆိတျနကွေတာလဲ ဆိုတဲ့ အတိအကကြောကျယူထားတဲ့ စဈတမျးတှမေရှိပမေဲ့ အမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားကွုံဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျတိုငျမကွုံရငျတောငျ သူမြားဖွဈတာကို ကွားကွရမယျထငျပါတယျ။
ဒီလို လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားခံရရငျ ဘာလို့ မိနျးကလေးတှေ နှုတျဆိတျနကွေတာလဲ?
ဒါမှမဟုတျ ပတျဝနျးကငျြကို ရှကျလို့လား?
ဒါကိုတော့ အကျဒျမငျတဈယောကျတညျးရဲ့ အမွငျနဲ့ ဖွရေရငျ ပတျဝနျးကငျြကို ရှကျလို့ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> အမြိူးသားတှေ ဝငျခှငျ့မရှိဘဲ အမြိုး သမီးတှပေဲကွီးစိုးတဲ့ရှာ Umoja
ကြူးလှနျသူတှေ ပဈမှတျထားတာကလညျး ဆယျကြျောသကျ နဲ့ နှဈဆယျဝနျးကငျြအမြိုးသမီးတှဖွေဈပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ ဒီအရှယျလေးတှကေ အတှအေ့ကွုံနညျးပွီး ရှကျတတျကွောကျတတျတာမို့ ကြူးလှနျရလှယျကူသလို လူသိရှငျကွားဖွဈတာလညျး နညျးပါတယျ။
အမြိုးသမီးလေးတှေ ရှကျလို့ ငွိမျခံနလေလေေ၊ ကြူးလှနျသူတှေ ဒီလို နောကျထပျကြူးလှနျဖို့ အားပေးသလိုဖွဈနလေလေပေါ။ ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ မိနျးကလေးတှေ မရှကျကွ၊ မကွောကျကွဘဲ ဖွရှေငျးရဲ၊ ကြူးလှနျသူကို နောကျမလုပျရဲအောငျ ဖျောထုတျရဲ ဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဆိုပမေဲ့လို့ တကယျတနျးတော့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ရှိရငျးစှဲရှကျကွောကျစိတျကို ဖြောကျဖို့ မလှယျကူပါဘူး။ မိနျးကလေးတှရေဲ့စိတျထဲမှာ နဂိုကတညျးက ရှကျတတျ၊ ကွောကျတတျတဲ့ စိတျအခံရှိနမေယျ၊ လူကွီးမိဘတှကေလညျး မိနျးကလေးဆိုတာ ဘယျလိုနရေထိုငျရမယျ၊ သူမြားစတယျဆိုတာ ကိုယျအနအေထိုငျမတတျလို့ ဆိုတဲ့ ရှေးဟောငျးနညျးလမျးတှနေဲ့ ဆုံးမနမေယျ ဆိုရငျ ဒီဖွဈရပျတှနေဲ့ ကွုံလာသညျ့တဲ့အခါ ကိုယျ့ဂုဏျသိက်ခာထိခိုကျမယျလို့ လှဲမှားစှာယူဆပွီး လူသိမခံရဲဘဲ ငွိမျနကွေမှာပါ။
ဒီအတှကျ အကျဒျမငျတို့ အမြိုးသမီးတှကေိုယျတိုငျက ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကို တဈစ တဈစ ပွောငျးလဲဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သမီးတှေ၊ ညီမတှေ၊ တူမလေးတှကေို ငယျစဉျ နားမလညျသေးတဲ့ အရှယျကတညျးက ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကိုငျတှယျသူရှိလာရငျ မခံဖို့၊ မရှကျကွောကျဘဲ လူကွီးတှကေို တိုငျဖို့ သငျပေးပါ။
Related Article >>> Black Hole ရဲ့ ပထမဆုံးဓာတျပုံကို ခပြွနိုငျခဲ့တဲ့အမြိုးသမီး (သို့) Katie Bouman
“မိနျးကလေးဆိုတာ” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကို သှပျသှငျးပွီး ရှကျဖို့၊ ကွောကျဖို့၊ အိန်ဒွကွေီးဖို့ သငျပေးတာထကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကာကှယျတတျတဲ့၊ ကိုယျ့ကို ထိပါးစျောကားလာရငျ တုံ့ပွနျတတျတဲ့ မိနျးကလေးမြိုးဖွဈအောငျ ပြိုးထောငျပေးပါ။
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးဟာ သူ့ရဲ့ ရငျသား နဲ့ အမြိုးသမီးအင်ျဂါမှာ မတညျပါဘူး။ ဒါတှကေို ကိုယျ့ခှငျ့ပွုခကျြမရဘဲ ဘယျသူမှ ထိကိုငျခှငျ့မရှိပါဘူး။ ကြူးလှနျခံရသညျ့တိုငျအောငျ ဒီလို ကြူးလှနျခံရခွငျးဟာ ကိုယျ့ ဂုဏျသိက်ခာ နဲ့ အရှကျတရားကို မယုတျလြော့စပေါဘူး။
ဒီလို ကြူးလှနျတတျတဲ့ အမြိုးသားတှေ နောကျထပျကြူးလှနျဖို့ အခှငျ့အရေး မရအောငျ အမြိုးသမီးတှကေ ရဲရငျ့စှာ ဖွရှေငျးရဲဖို့ သိပျကို လိုအပျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…ဒီလို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျ တို့တှေ အဓိက လိုအပျတာက ဖွရှေငျးရဲတဲ့ သတ်တိကို မှေးဖို့ပါပဲလို့..
Tags: Abuse, empowerment, Harrassment, sexual, women
တအားလက်သရမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကို bff တော်ထားရတဲ့အခါ…
Yin Sandi Ko May 18, 2019
For Her Myanmar May 14, 2019